Indian Rupees to Zimbabwe Dollars - 180 Day Graph - Exchange Rates
Indian Rupees (INR) to 1 Zimbabwe Dollar (ZWD)
The graph below shows historical exchange rates between the Indian Rupee (INR) and the Zimbabwe Dollar (ZWD) between 11/24/2012 and 12/31/2012
30 Day Graph - View 30 days of exchange rate history for the Indian Rupee against the Zimbabwe Dollar.
90 Day Graph - View 90 days of exchange rate history for the Indian Rupee against the Zimbabwe Dollar.
180 Day Graph - View 180 days of exchange rate history for the Indian Rupee against the Zimbabwe Dollar.
Monthly Average Graph - View average monthly exchange rate history for the Indian Rupee against the Zimbabwe Dollar.
Invert graph - The graph currently shows historical exchange rates for Indian Rupees per 1 Zimbabwe Dollar. Invert the graph to see Zimbabwe Dollars per 1 Indian Rupee.
View Data - View historical exchange rates for the Indian Rupee against the Zimbabwe Dollar in a tabular format.
The graph above displays historical exchange rates between the Indian Rupee and the Zimbabwe Dollar. If you would like to graph historical exchange rates between the Zimbabwe Dollar and another currency, please select a currency from the list below: